Ny lahatsoratr'i Denis Zhinko ao amin'ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Denis Zhinko
Denis no lohan'ny CRM sy fiaraha-miasa ho an'ny ScienceSoft. Manana traikefa matihanina mihoatra ny 14 taona amin'ny IT izy, manao fampivoarana fampiharana matihanina, famolavolana rafitra sy fitantanana ny tetikasa eo amin'ny CRM, ERP ary ny Portal Enterprise.
Alarobia 16 Janoary 2019 Sabotsy, Janoary 19, 2019 Denis Zhinko
Ireo mpivarotra dia mazàna mahita ny fanaingoana ny mailaka ho toy ny famantarana ny fahombiazan'ny fampielezana mailaka avo lenta ary hampiasa azy io be dia be. Saingy mino izahay fa ny fomba feno fahendrena amin'ny fanaingoana mailaka dia manome valiny tsara kokoa avy amin'ny fomba fijery mahomby. Izahay dia mikasa ny hamoaka ny lahatsoratray amin'ny alàlan'ny mailaka taloha be dia be ka hatramin'ny personalization mailaka be pitsiny mba hampisehoana ny fomba fiasan'ny teknika samihafa arakaraka ny karazany sy ny tanjon'ny mailaka. Hanome ny teôria an'ny